Gịnị bụ azụmaahịa mmekọrịta yana atụmatụ iji tinye ya | Ozi ECommerce
Encarni Arcoya | | Ahịa ahia
Ị nụtụla ahịa mmekọrịta? Dị ka ị maara, usoro ịzụ ahịa ịntanetị na -agbanwe agbanwe mgbe niile na nke ahụ na -egosikarị na ị ga -ama ihe na -abịa na mgbanwe. N'okwu a, ihe ahịa mmekọrịta Ọ bụ mmalite nke ọdịnala, mana ọtụtụ ndị aghọtaghị ya, ma ya fọdụzie itinye ya n'ọrụ.
Yabụ, oge a anyị chọrọ inyere gị aka ịghọta echiche ya, ihe dị iche na nke ọdịnala, ihe ọ bụ na uru ọ nwere. Na mgbakwunye, ị ga -amụta itinye ya n'ọrụ gị. Anyị enwere ike ịga ọrụ?
1 Kedu ihe bụ ahịa mmekọrịta
1.1 Ọdịiche dị n'etiti ịre ahịa mmekọrịta na ịre ahịa ọdịnala
2 Kedu ihe mgbaru ọsọ ị nwere
3 Uru dị n'iji ahịa mmekọrịta
4 Otu esi etinye ya n'ọrụ gị
A makwa ahịa mmekọrịta dị ka ahịa mmekọrịta. Ọ gụnyere usoro atụmatụ na ụzọ esi enweta nsonaazụ ya ogologo oge. Ndị ebumnobi nke ahịa a bụ iwulite ntụkwasị obi ndị ahịa, si otú a na -enyere aka ịbawanye ihe ndị ahịa zụrụ ma rite uru ọ bụghị naanị ụlọ ọrụ, kamakwa onye ahịa n'onwe ya. Maka nke a, ntụkwasị obi na ọnụ ahịa agbakwunyere bụ ogidi abụọ dị oke mkpa.
N'okwu a, azụmaahịa mmekọrịta dabere na onye ahịa niile, ọ bụghị na ngwaahịa a, ọ bụ ya mere atụmatụ a na -etinye lekwasịrị anya n'inye ndị ahịa nlebara anya nkeonwe. Ọ dabereghị na ime ka ị kweta ire ngwaahịa a, kama ọ bụ ijere gị ozi n'ụzọ tụkwasịrị obi na ịzụrụ ihe ọ bụla ị zụtara n'ụlọ ahịa ga -adị mma.
Ọdịiche dị n'etiti ịre ahịa mmekọrịta na ịre ahịa ọdịnala
Enwere ike ịghọta ahịa mmekọrịta dị ka mmalite nke ahịa ọdịnala, mana kedu ihe dị iche na ha abụọ? N'okwu a, ọ bụghị naanị eziokwu na ịzụ ahịa mmekọrịta na -elekwasị anya na ndị ahịa yana ahịa ọdịnala na ngwaahịa a, mana ọ na -aga n'ihu:
Nkwurịta okwu. Ọ bụ ezie na ọdịnala na -achọ iru ndị na -ege ntị sara mbara site na imepụta ozi nwere ike iru ọnụ ọgụgụ ka ukwuu, n'ihe gbasara mmekọrịta ọ dabere na mkparịta ụka onwe onye na nkeonwe, na -ebute ndị ahịa n'onwe ha ụzọ.
Atụmatụ. N'adịghị ka ahịa ọdịnala, nke na-eme atụmatụ obere oge, ahịa mmekọrịta na-adịte aka, ebe ọ bụ na ihe ọ na-agba mbọ ime bụ iwulite ntụkwasị obi ndị ahịa.
Ebumnuche ikpeazụ. Anyị ekwuola na ebumnobi azụmaahịa mmekọrịta lekwasịrị anya na onye ahịa. Mana maka nke a, ọ chọghị ka ebumnuche ya mezuo n'oge dị mkpirikpi, mana na ogologo oge, ọ chọghịkwa ire, mana iji mee ka mmekọrịta dị ike.
Kedu ihe mgbaru ọsọ ị nwere
N'izugbe, na ebumnobi nke ahịa mmekọrịta bụ:
Mee njikọ na onye ahịa. Nke a pụtara ịmara onye ahịa, mkpa ha yana ihe ị nwere ike imere ha.
Mepụta usoro atụmatụ dabere na ọrụ ndị ahịa, ọ bụghị nke ukwuu na ngwaahịa a.
Ka afọ ju onye ahịa.
Uru dị n'iji ahịa mmekọrịta
Ahịa mmekọrịta na -aga n'ihu. Ugbu a ụlọ ọrụ achụmnta ego anaghị elekwasị anya nke ukwuu n'ịre ahịa ngwa ngwa, mana na ndị ahịa maara ha na -anọnyere ha wee si otú a na -enye ha ozi ka mma. Ọ dị ka ụlọ ọrụ ekwentị. Agbanyeghị na ọnụego ha nwere bụ otu maka onye ọ bụla, ihe ha na -achọ bụ ịgbalị imeju onye ahịa ya, maka nke a, ha na -enye onyinye ma ọ bụ onyinye nwere ike inyere ha aka ịnọ ogologo oge o kwere mee. Ọ dị mma, n'ihe banyere ụlọ ahịa n'ịntanetị ọ yiri. Ma ọ bụ na enwere ọtụtụ uru a, dịka:
Mmụba na LTV. LTV bụ ngọngọ nke ejiri mara ndụ oge niile, ma ọ bụ ihe bụ otu, bara uru na usoro iheomume. Ọ na -ezo aka na idobe ndị ahịa ogologo oge o kwere mee, na -agbalị ịgbakwunye uru ma mee ka onye ahịa nwee mmetụta dị ka mmadụ, ọ bụghị dị ka nọmba nkwekọrịta.
Mee ka ha bụrụ ndị nnọchianya. Ọ bụrụ na ị nwere webụsaịtị ebe ha na -emeso gị nke ọma, ebe ha na -ere gị dabere na mkpa gị (ọ bụghị ihe ha chọrọ ire), na ị na -echekwa na ha na -eche banyere gị, ịcheghị na ị ga -akwado saịtị ahụ nye ndị ezinụlọ ọzọ ma ọ bụ ndị enyi? N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị ga -enweta ndị ahịa na -eguzosi ike n'ihe ga -akwadokwa gị ndị ọzọ.
Ị na -ebelata mmefu. Kwere ma ọ bụ na ị kwenyeghị, mmefu ego n'ahịa na mgbasa ozi iji rute ndị ahịa ndị ọzọ na -ebelata. Na mbụ ị gaghị aga, mana ebe ị nwere ndị ahịa na -eguzosi ike n'ihe, ị gaghịzi akwụ ụgwọ iji kpọsaa ma ọ bụ mara gị, ndị ahịa gị ga -amalarị gị ya.
Onye ahịa nwere obi ụtọ, ịzụ ahịa obi ụtọ. Were ya na ị na -abanye n'ụlọ ahịa. Ị na -amalite ile ihe anya na mberede, onye na -enyere ụlọ ahịa aka bịakwutere gị na -ajụ gị ihe ị na -achọ. N'ezie ị ga -aza na ị na -ele anya, mana gịnị ma ọ bụrụ na onye ahụ anaghị akwagharị ma na -eso gị mgbe niile? N'ikpeazụ, ị ga -emecha hapụ ụlọ ahịa n'ihi na ahụ erughị gị ala. Ọ dị mma, nke a na ụwa ịntanetị na -eme mgbe ha mejuru gị ngwaahịa ndị metụtara ndị ị hụworo, ma ọ bụ ha nwaa ịnye gị onyinye ịzụrụ. Ugbu a, ọ bụrụ na kama ime nke ahụ, ị ​​na -elekwasị anya na atụmatụ na -ejikọ gị na onye ahịa, ịcheghị na ha ga -enwe afọ ojuju karịa ịnọ n'ụlọ ahịa wee hụ ngwaahịa na -enweghị mmetụta ahụ na ihe ịchọrọ ka ha zụta?
Otu esi etinye ya n'ọrụ gị
N'ime ahịa ọdịnala, etinyere ha n'ọrụ usoro mgbe ire ere mechara, dị ka ozi ịre ahịa ka ị mata ma ihe ị zụtara masịrị gị, ma ọ bụrụ na ngwaahịa juru gị afọ, wdg.
Ma, n'eziokwu ahịa mmekọrịta, ọ na -aga n'ihu. Ụfọdụ usoro nwere ike ịbụ:
Izipu ozi ịntanetị ire ere ma ọ bụrụ na ịzụtara ihe kamakwa ọ bụ ụbọchị ọmụmụ ma ọ bụ ncheta obi ụtọ dịka onye ahịa.
Izipu vidiyo metụtara ngwaahịa ị zụtara ka ị mara ọrụ niile ọ nwere ike inwe.
Nkwupụta na netwọkụ mmekọrịta. Ụlọ ọrụ na -atụ anya mgbe niile ka ndị ahịa na -aza ajụjụ ha; mana ebe a ọ gaghị adị otu a, mana na ntụle. Biputere nkọwa na netwọkụ mmekọrịta nke onye ahụ iji mepụta mmekọrịta n'etiti ha.
Zitere gị nkọwa. Ihe ijuanya, ihe na -eme ka ụlọ ọrụ ahụ hụ gị n'anya.
Ụgwọ. Dị ka ego ma ọ bụ nkwalite pụrụ iche iji mee ka ị nwee mmetụta pụrụ iche.
Ugbu a ọ bụ oge gị iche maka atụmatụ azụmaahịa mmekọrịta maka azụmaahịa gị. Na mbụ ọ nwere ike rie gị, mana ihe dị mma bụ na ị nwere ike gbanwee ya dabere na ihe ị mụtara ịchọta nke kachasị gị mma maka ụlọ ahịa ịntanetị gị (ma ọ bụ maka webụsaịtị gị n'ozuzu).
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ahịa ahia » Kedu ihe bụ ahịa mmekọrịta
Akwụkwọ ntuziaka njirimara ụlọ ọrụ: ihe ọ bụ na otu esi emepụta otu